သိပ်ချစ်လွန်းလို့သာ မဆက်သွယ်ပဲနေနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတာပါ – Hlataw.com
မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ အနားမှာ အားကိုးအားထားပြုစရာ ယောက်ျားသားတစ်ယောက်မရှိရင် မတင့်တယ်လှပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ရှေးလူကြီးတွေက “ အလံ မရှိတဲ့ရထား ” ဟာ မသင့်တော်ဘူးရယ်လို့ အဆိုရှိခဲ့ကြတာကိုး။ မိန်းမတွေထဲက မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ ကျမဟာ အားကိုးအားထားပြုစရာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို အပျိုဖြစ်ခါစကတည်းက ပေါင်း သင်းလက်ထပ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်…ကျမတို့ အိမ်ထောင်သက် နှစ်(၂၀)လောက်မှာပဲ ကျမရဲ့အမျိုးသားဟာ အက် ဆီးဒင့်တစ်ခုကြောင့် ဆုံးပါးသွားခဲ့ရပါတယ်။ ကျမဟာ ကလေးနှစ်ယောက်အမေ၊ အသက်(၃၇)နှစ်အရွယ်နဲ့ မုဆိုးမဘဝကို ရောက်ရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။ ကျမယောက်ျားက ကျမကို အတော်လေးချစ်ပါတယ်။ သူဆုံးပါးသွားတဲ့အချိန်ထိ ကျမကို စောင့် ရှောက်ခဲ့တုန်းပါပဲ။ သူအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အတွက် လျော်ကြေးရတဲ့ငွေနဲ့ ကျမဟာ စက်ဆန်းဘက်မှာ ကိုယ်ပိုင် အိမ်လေးတစ်လုံးကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုဆို ကျမရဲ့သားအကြီး မင်းမင်းတောင် အသက်(၁၈)နှစ်ကျော် လူပျိုပေါက်အရွယ် ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ ပိုလျှံတဲ့ ငွေ လေးနဲ့ ကျမတို့ မိသားစုသုံးယောက်ဟာ လည်ပတ်စားသောက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိပါတယ်။ သမီးအငယ်လေးကလည်း ခုဆို ဒုတိယတန်းတက်နေတဲ့အရွယ်တောင် ရောက်လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျမဟာ လင်သားဆုံးပါးသွားတဲ့ အချိန်ကစလို့ ကျမရဲ့စိတ်တွေကို သားနဲ့ သမီးအပေါ်မှာပဲ ပုံထားခဲ့ပါတယ်။ လင်ဖြစ်သူမရှိတော့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ကာမအရ သာ၊ အထိအတွေ့တွေနဲ့ ကင်းကွာနေခဲ့ရပါတယ်။ ထိုကာလအတွင်း၌ ကာမစိတ်ဆန္ဒများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်တောင့်တမိသ လိုရှိခဲ့သော်လည်း သားလူပျိုပေါက်နဲ့ သမီးမျက်နှာတို့ကို ထောက်ထားပြီး အသစ်ရှာတာမျိုး၊ ကွယ်ရာမှာ ခိုးစားတာမျိုးတောင် မလုပ်ခဲ့ပါဘူးရှင်။ မိန်းမသားတစ်ယောက်ပဲရှင်…။ အသက်ကလည်း (၃၈)နှစ်တောင် မပြည့်သေးတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ ကျမ သွေးသား တွေက ထကြွသောင်းကျန်းတုန်းပေါ့။
လင်နဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ပေါင်းခဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အနားမှာ ယောက်ျားသား မရှိတော့ တခါတရံ ခံစားထိတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့အရာကို တောင့်တမိတာပေါ့ရှင်။ ဒါပေမယ့် ကျမရဲ့ကာမဆန္ဒတွေကို ချုပ်တီးနေခဲ့ပါ တယ်။ တချို့မိန်းမတွေ ပြောပြောနေတဲ့ ကိုယ့်စောက်ဖုတ်ကို ကိုယ့်ဘာသာပွတ်ပြီး အာသီသဖြေတဲ့ အပြုအမူမျိုးကိုတောင် ကျမ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့မိသားစု စက်ဆန်းဘက်ကို ပြောင်းပြီး အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲ ကျမရဲ့စိတ်၊ ကျမရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေဟာ ကျမသားအကြီးကောင် မင်းမင်းကြောင့် ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတော့တယ်ရှင်။ ကျမသား မင်းမင်းက ဒီရပ်ကွက်ထဲပြောင်းလာပြီးတဲ့နောက် လူပေါင်းစုံနဲ့ အပေါင်းအသင်းလုပ်တယ်။ ပေါင်းသင်းတဲ့လူတွေ ကလည်း သူ့ထက်ကြီးတဲ့လူတွေ များပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ စိုးသီဟဆိုတဲ့ကောင်လေးကို ကျမသားက အတော်လေး ခင်မင် ရှာပါတယ်။ စိုးသီဟက ကျမသားထက် (၅)နှစ်လောက်ကြီးတယ်။
ရပ်ကွက်ထဲမှာ အခွေတွေရောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ကောင် လေးပါ။ သားက အဲဒီကောင်လေးကို အိမ်ကို ခေါ်ခေါ်လာတတ်တယ်။ အိမ်မှာ စားကြ သောက်ကြနဲ့ အမြဲလို ဝင်ထွက်သွား လာနေခဲ့ပါတယ်။ ဖခင်ရဲ့ထိန်းသိမ်းမှုမဲ့သွားတဲ့သားက ကျမရဲ့ပြောစကားကို သိပ်ပြီးအလေးမထားတော့ပါဘူးရှင်။ နောက်ပြီး အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို သားက တာဝန်ယူထားပြန်တော့ ကျမဟာ သားကို ဖိဖိစီးစီးပြောဆိုမရနိုင်တော့တဲ့ အ ခြေအနေတွေကြောင့် သားဖြစ်သူ အိမ်မှာ သောက်စားနေတာကိုတောင် ခွင့်ပြုပေးထားရပါတော့တယ်။ စိုးသီဟ ကို အိမ်ပေါ် ခေါ်လာပြီး အိမ်မှာပဲ စားကြသောက်ကြ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ လူငယ်သဘာဝနေကြတာကို ကျမ ကြည်ဖြူစွာပဲ လွှတ်ထား လိုက်မိပါတယ်။ စိုးသီဟက ကျမကို “ အစ်မ…အစ်မ…” နဲ့ ရိုရိုသေသေပြောဆိုဆက်ဆံပြန်တော့ စိုးသီဟကို ယုံကြည်ပြီး သားကိုတောင် ပြောဆိုထိန်းသိမ်းပေးဖို့ အပ်ခဲ့မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တခါတရံ စိုးသီဟရဲ့ အကြည့်တွေကို ကျမ မကြိုက်လှပါ ဘူးရှင်။ သားလစ်တဲ့အချိန်တွေမှာဆို ကျမကို စူးစူးရဲရဲကြည့်တတ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ကျမကို ပုံမှန်ပြောဆို ဆက်ဆံတာဆိုတော့ ကျမလည်း မသိကျိုးကျွံပြုထားမိပါတယ်။ ပြောရအုံးမယ်ရှင့်….။ ကျမနာမည်က အိချောဝေ။ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ထွားထွားအိအိနဲ့ ခပ်ချောချောမိန်းမတစ် ယောက်ပါ။ ကလေးနှစ်ယောက်အမေ မုဆိုးမဖြစ်နေပေမယ့် ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ဗိုက်ကလေးနည်းနည်းပူတာကလွဲလို့ ရင် အစုံက မို့မောက်တင်းရင်းနေဆဲပါပဲ။ ခါးကလည်း အဆီမရှိသိမ်ကျဉ်းပြီး တင်သားတွေကလည်း ကားစွင့်တင်းရင်းနေတုန်းပါပဲ ရှင်။ ကျမကို ကမ်းလှမ်းချဉ်းကပ်တဲ့ ယောက်ျားတွေ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ ပြောခဲ့သလိုပေါ့။ ကျမသားလူပျိုပေါက်နဲ့ သမီးငယ်တို့ကို ထောက်ထားပြီး အသစ်မရှာခဲ့တာပါ။ ယောက်ျားနဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကင်းကွာနေတော့ ကျမရဲ့အသွေးအသားတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ် ပေါ်က အဖုအထစ်၊ အမို့အမောက်၊ အကားအစွင့်တွေက။
ပိုပြီးစိုပြေတစ်ရစ်နေတာပေါ့ရှင် ကျမရဲ့နုပျိုမှုတွေကို စိုးသီဟဆိုတဲ့ ကောင်လေးက မျက်စိကျနေပုံရပါတယ်။ ယောက်ျားတိုင်းလိုလို တပ်မက်ကြတဲ့ ကျမခန္ဓာကိုယ်ကို အဲဒီကောင်လေးလည်း တပ်မက်မိမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျမက စိုးသီဟရဲ့ အကြည့်တွေကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အလိုက်အထိုက်ဆက်ဆံနေခဲ့ပါ တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ စိုးသီဟက အဲဒီလောက်နဲ့ မတင်းတိမ်နိုင်ဘူးရှင့်။ တစထက်တစ ပိုပိုပြီးရဲတင်းလာပါတော့တယ်။ သားမ ရှိလည်း အိမ်ကို ဝင်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျမသားအပြင်သွားတဲ့အချိန်တွေနဲ့ ကျမသမီးငယ်ကျောင်းသွား နေတဲ့အချိန်တွေဆို အိမ်ကို ရောက်ရောက်လာပါတယ်။ အိမ်မှာတစ်ယောက်ထဲရှိနေတဲ့ ကျမကို စကားပြောရင်း ရယ်ကာ မောကာနှင့် ခြေတို့လက်တို့တွေ လုပ်လာပါတယ်။ အကြမ်းဖက်တာမျိုး၊ အနိုင်ကျင့်စော်ကားတာမျိုးမဟုတ်တော့ ကျမဘက် ကလည်း သူ့ကို ခါးခါးသီးသီးမတုန့်ပြန်ခဲ့မိပါဘူးရှင်။
နောက်တစ်ချက်က သားဖြစ်သူ မင်းမင်းက စိုးသီဟကို ဆရာတင်ပြီး ခင် မင်နေသလို ကျမသမီးငယ် နှင်းဝေလွင်လေးကလည်း စိုးသီဟကို ခင်မင်နေတာတွေကြောင့်လည်း ကျမက သူ့အပြုအမူတွေ ကို အပြစ်မမြင်မိဘဲ အလိုက်အထိုက်နေနေမိတာလည်း ပါတာပေါ့ရှင်….။ စိုးသီဟက လူပုံခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်၊ ဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့ မိန်းကလေးတွေကျလောက်တဲ့ ရုပ်မျိုး။ ဒါပေမယ့် နာမည် ပျက်ရှိနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာအနေကြာလာတော့ မိန်းမချင်းအတင်းပြောကြတဲ့ စကားဝိုင်းကနေ စိုးသီဟ အ ကြောင်းကို ကျမ သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းက…. “ ဟဲ့ စန်းရီ…နင် မိဇင်အကြောင်းကြားပြီးပြီလား….” “ ဘာများတုန်း အဝင်းရဲ့….” “ မိဇင်က အခု ဟိုကောင်လေး စိုးသီဟကို ကုန်းနေတယ်ဆိုပဲ….” မိန်းမတွေ အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာပြီး ရပ်ကွက်ထဲက အတင်းအဖျင်းမှန်သမျှ စုပြောတတ်တဲ့ ဒေါ်ဝင်းသန်းတို့ ခြံထဲမှာ နေ့လည်ခင်းဝိုင်းဖွဲ့နေတဲ့ဆီ အမှတ်တမဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့ ကျမဟာ။
စိုးသီဟဆိုတဲ့ နာမည်ပါလာတာနဲ့ အသေအချာနားထောင် နေမိပါတယ်။ “ မိဇင် ယောက်ျား ထွန်းရွှေက ကိုယ်တစ်ပိုင်းလေဖြတ်နေမှတော့ ကောင်မက ဆာနေပြီပေါ့ဟဲ့….ဟိုနေ့က ပုဇွန် တောင်ဘက်က တည်းခိုခန်းထဲ မိဇင်နဲ့ စိုးသီဟတို့ အတူတူတွဲဝင်သွားတာ တွေ့လိုက်တယ်တဲ့….” “ ဟုတ်ရဲ့လား အဝင်းရယ်….” “ အော်…ငါက မဟုတ်တဲ့ သတင်းကို ဘယ်တုန်းက ပြောခဲ့ဖူးလို့လဲ….” “ အဲဒီ စိုးသီဟ ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက မမြင့်ရီနဲ့လည်း ဖြစ်သေးတယ်မဟုတ်လား အဝင်းရဲ့….” “ အေးလေ….မမြင့်ရီက အခုပျဉ်းမနားမှာ တာဝန်ကျလို့ ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ သူတို့အကြောင်းကိုသိထားတဲ့ မိဇင် က စိုးသီဟကို ဆွဲစိလိုက်တာနေမှာပေါ့အေ….” “ စိုးသီဟက ရုပ်ကလေးသနားကမားနဲ့ သူနဲ့ရွယ်တူကောင်မလေးတွေကို မတွဲဘူးနော် အဝင်း….တစ်ခုလပ်မတို့ လင်ရှိမိန်းမတို့နဲ့ပဲ အလုပ်ဖြစ်နေတယ်….အဟင်း….ဟင်း….” စိုးသီဟအကြောင်းတွေက မကြားချင်မှအဆုံးပါပဲရှင်။
ဒါတောင် စိုးသီဟကို လင်ရှိနေလျက်နဲ့ ကြောင်တောင်နှိုက်ချင် နေတဲ့မိန်းမတွေက တစ်ပုံကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုပဲ။ ကောင်လေးက ဇလေးနဲ့ကိုးရှင့်။ စိုးသီဟရဲ့ ဇ ကိုသိလာရတော့ ကျမဟာ စိုးသီဟနဲ့ ပတ်သက်ဆက်ဆံနေရတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ စိတ်ထဲလှုပ်ခတ်လာမိပါတယ်။ သူက မုဆိုးမ၊ တစ်ခုလပ်၊ လင်ရှိ မိန်းမတွေနဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေကျလူဆိုတော့ ကျမကိုလည်း ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပေါ့ရှင်….။ တစ်နေ့မှာတော့ ကျမရဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြောင်းလဲသွားစေမယ့် အခြေအနေနဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခုကို စတင် လျှောက်လှမ်းခဲ့မိပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ကျမသား မင်းမင်းက အိမ်မှာမရှိဘူး။ သမီးငယ် နှင်းဝေလွင်နဲ့ ကျမပဲ အိမ်မှာရှိနေတဲ့ အချိန်မှာ စိုးသီဟ တစ်ယောက် အိမ်ကို ရောက်ချလာပါတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းပေါ့ရှင်။ “ အစ်မ…အိပ်ခန်းမီးမလင်းတော့လို့ဆို…မင်းမင်း ပြောလို့….သူ မလုပ်တတ်လို့ ကျနော့်ကို လုပ်ပေးပါဆိုတာနဲ့ ထွက်လာတာ….” “ အော်….အေး…ဟုတ်တယ်…မောင်လေးရဲ့….အစ်မ လည်း မလုပ်တတ်ဘူး….။
တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါအုံး ကွယ်….မီးချောင်းကျွမ်းသွားတာလား မသိဘူး….” စိုးသီဟက ကျမတို့ အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်။ ကျမတို့ အိမ်ကပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး တစ်ထပ်အိမ်လေးပုံစံပါ။ အိမ်ထဲမှာ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း၊ စတိုခန်းလို အခန်းကျဉ်းတစ်ခန်းနဲ့ ဧည့်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်တို့ ဖွဲ့စည်းထားပါ တယ်။ မင်းမင်းက တစ်ယောက်ထဲ တစ်ခန်းအိပ်ပြီး ကျမနဲ့ သမီးက တစ်ခန်းသပ်သပ် အိပ်ပါတယ်။ မီးမလာတာက ကျမတို့ အိပ်ခန်းပါ။ “ အစ်မရေ….တစ်ချက်လောက် လာကူပါအုံးဗျာ….” အိပ်ခန်းထဲမှ စိုးသီဟရဲ့ အသံကြောင့် ကျမရော သမီးပါ အိပ်ခန်းထဲ ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ယောက်ထဲဆိုရင် မသင့် တော်ဘူးလို့ ထင်တဲ့အတွက် သမီးကိုပါ အဖော်အဖြစ် ခေါ်သွားခဲ့တာပါ။ “ ဒီမှာ ဆက်ထားတဲ့ ဝါယာက ပျက်နေတာ အစ်မ….ကတ်ကြေးလိုတယ်….နောက်ပြီး မိန်းခလုတ်လည်း ချပေးထား ပါအုံး….” “ သမီး နင့်အကိုကြီးကို ကတ်ကြေးယူပေးလိုက်….အမေ…မိန်းသွားချလိုက်မယ်….” ။
“ အစ်မက ဒီမှာနေပြီး ကျနော့်ကို ကူရမှာဗျ….နှင်းဝေကို မိန်းချခိုင်းပြီး အဲဒီမှာ ခဏစောင့်ခိုင်းလိုက်ပါလား….ဒီကရ ရင် လှမ်းပြောလိုက်မယ်….မီးလာ မလာစမ်းရအောင်….” စိုးသီဟက ကျမသမီးကို အပြင်ဘက်မိန်းရှိရာသို့ ပထုတ်လိုက်မှန်း ကျမရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။ ကတ်ကြေးယူပေးရင်း စိုးသီဟအနားမှာ ရပ်နေမိပါတယ်။ အဲဒီမှာ စိုးသီဟက စတော့တာပါပဲ….။ “ အစ်မ…ဒီကြိုးလေး ကိုင်ပေးထား….” “ အင်း…ဟို…ဓာတ်တော့ မလိုက်ပါဘူးနော်….” “ မလိုက်ပါဘူး အစ်မရဲ့….နှင်းဝေကို မိန်းချခိုင်းထားတာပဲဟာ….နှင်းဝေရေ….မိန်းကို သေချာချထားရဲ့လား….” “ ဟုတ်…ချထားတယ် အကိုကြီး….” စိုးသီဟက အပြင်ဖက်မှ နှင်းဝေကို သေချာအောင် အော်မေးလိုက်သေးတယ်။ ပြီးမှ ကျမကို ဝါယာကြိုးတစ်ချောင်း ကို ကိုင်ခိုင်းထားပါတယ်။ ဝါယာကြိုးက ကျမအရပ်ထက် နည်းနည်းမြင့်တဲ့နေရာမှာ သွယ်ထားတာဆိုတော့ ကျမလက်ကို အ စွမ်းကုန်မြှောက်ပြီး ဝါယာကြိုးကို ကိုင်ထားရပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ကျမရဲ့ရင်အစုံက လက်မြှောက်ထားခြင်းကြောင့် မို့မောက် ကြွတက်နေပြီး မမှီမကမ်းနဲ့ ခြေဖျားလေး ထောက်ထားပြန်တော့ တင်သားအစုံကလည်း ကော့တက်ကောက်ချိတ်နေတာပေါ့ ရှင်။ အကယ်ဒမီရုပ်ထုလိုပေါ့။ အဲလိုအနေအထားဖြစ်နေတဲ့ ကျမကို စိုးသီဟက တစ်ကိုယ်လုံးသိမ်းကြုံးကြည့်ပြီး တံတွေးကို မျိုချနေတာ ကျမမြင်နေရပါတယ်။ ပြီးလည်း ပြီးရော…. “ အို…” ကျမနှုတ်က ခပ်တိုးတိုးအသံလေး ထွက်သွားရပါတယ်။ သူက ကျမနောက်တည့်တည့်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျမဖင်ဆုံ ကြီးကို တိုးဖိကပ်လိုက်တာကြောင့်ပါ။ ပုဆိုးဝတ်ထားတာတောင် အတော်လေးရှေ့ကို ငေါထွက်နေတဲ့ သူ့လီးတန်ကြီးနဲ့ ကျမ ဖင်ကို ဖိကပ်လို့ထားပါတယ်။ ကျမရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်သွားရသလို နားရွက်ဖျားတွေလည်း ပူထူသွားရပါတယ်။ သူ့ပုဆိုး အောက်ကဟာကြီးက မနည်းမနောလားရှင်။ ဒီကြားထဲ မတ်ထောင်ပြီး တင်းနေသေးပါတယ်။ အထိအတွေ့အရ စိုးသီဟရဲ့ လီးတန်ကြီးဟာ အတော်လေးကြီးပြီး ရှည်မယ်ဆိုတာ။
ကျမခန့်မှန်းမိပါတယ်။ “ အစ်မ…ကြိုးကို မလွှတ်လိုက်နဲ့နော်….ကျနော် ပြန်ဆက်နေပြီ….” စိုးသီဟက ကျမနောက်နားကနေ ပုခုံးကိုကျော်ပြီး ကျမနားရွက်နားကပ်ကာ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ ထူပူနေပါပြီ။ ရှက်စိတ်၊ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ကျမဟာ သူပြောတဲ့အတိုင်း ပုံစံမပျက်ဘဲ ဝါယာကြိုးကို ကိုင်ထားပေးနေမိတော့ သူက လည်း ကျမဖင်ကို သူ့လီးနဲ့ စိတ်ကြိုက်ကို ဖိထောက်ထားလို့ ရနေတာပေါ့ရှင်….။ အချိန်က နှစ်မိနစ်ကျော်ကျော်လေးပဲ ကြာ သွားတာပါ။ ခဏနေတော့ လူချင်းပြန်ခွာသွားပါတယ်။ ကျမရဲ့ နားရွက်နားကိုကပ်ပြီး ကျမနားရွက်ကို သူ့လျှာဖျားလေးနဲ့ မထိ တထိ လှမ်းထိုးလိုက်ရင်း…. “ အစ်မ…ရပြီ…လွှတ်လိုက်တော့လေ….” လို့ ခပ်တိုးတိုးလေးပြောပါတယ်။ ကျမတစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးဖုလေးတွေ ထသွားပြီး ရင်တွေလည်း အရမ်းကို ခုန်နေမိပါတယ်။ “ နှင်းဝေရေ….မိန်းပြန်တင်ကြည့်ဟေ့….” စိုးသီဟက အပြင်က ကျမသမီးကို အော်ပြောလိုက်သံကြားမှ ကျမစိတ်ကို မနည်းပြန်ထိန်းလိုက်ရပါတယ်။
ကျမဟာ အထိအတွေ့ကြောင့် ကြောင်ရပ်နေမိတာကိုးရှင့်။ ကျမ စိုးသီဟရဲ့အကြံကို ခုမှသေချာနားလည်လိုက်ရပါတယ်။ သူက ကျမ သမီးကို အပြင်မှာ ပထုတ်ထားပြီး ကျမကို အပိုင်ကိုင်သွားတာကိုးရှင့်။ တကယ့်ကို လူလည်ပါပဲရှင်….။ “ အိုကေ….လင်းသွားပြီ….” မီးက ပြန်လင်းသွားပါပြီ။ စိုးသီဟလည်း ပြန်သွားပါပြီ။ ကျမမှာတော့ စောစောက ထိတွေ့လိုက်ရတဲ့ စိုးသီဟရဲ့ လီးတန်ကြီးကြောင့် စိတ်ထဲမရိုးမရွနဲ့ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ကျန်ခဲ့ရပါတော့တယ်ရှင်။ “ အဟင့်….ဖြေးဖြေးလုပ်နော်….သမီး နိုးသွားမယ်….” “ အင်းပါ…မမချောရဲ့….” “ ဟွန်း…လူကို ညာညာပြီး လာအနိုင်ကျင့်တယ်…အိုး…ဟင့်…ဖြေးဖြေးသွင်းနော်….အင်း…ဟင့်….” အထက်ပါစကားသံတွေက ကျမအိချောဝေနဲ့ စိုးသီဟတို့ ပြောနေကြတဲ့ စကားသံတွေပါ။ ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ ကျမရဲ့အိမ်၊ ကျမသား မင်းမင်းရဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာပါပဲ။ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဆိုတော့…။
စိုးသီဟက အိမ်ထောင်သည် မိန်းမ၊ တစ်ခုလပ်၊ မုဆိုးမ စတဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ အထာကို တော်တော်နပ်တဲ့ ကောင်လေးပါ။ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ပြောဆိုပူးကပ်ရ မလဲဆိုတာ သူကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ကျမကို အထိအတွေ့တွေနဲ့ ဖြားယောင်းသိမ်းသွင်းခဲ့တာပါ။ ကျမ အိပ်ခန်း ထဲမှာ မီးကြိုးဆက်ပေးတုန်းက အပြုအမူလိုမျိုးတွေနဲ့ အထိအတွေ့တွေပေးပြီး ကျမရဲ့ စိတ်တွေကိုနှူးဆွလို့ ကျမကို အပိုင် သိမ်းသွားခဲ့တာပေါ့ရှင်…။ လင်သေပြီး ယောက်ျားနဲ့ ကင်းကွာနေတဲ့ကျမ၊ သွေးသားတွေ ဆူဖြိုးထကြွနေတဲ့ ကျမဟာ စိုးသီဟရဲ့ အထိအတွေ့တွေကို ကြာရှည်တောင့်ခံနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ဘဲ စိုးသီဟပြုသမျှ နုရတဲ့အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ရပါတော့ တယ်ရှင်။ နောက်ပြီး သားဖြစ်သူက အိမ်သိပ်မကပ်တာလည်း ပါတာပေါ့ရှင်။ သားမရှိတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အတွေ့တွေ နဲ့ ဖြားယောင်း နောက်ဆုံး ကျမကို တက်လိုးသွားတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
ကျမဟာ သမီးကျောင်းသွား နေတဲ့အချိန်မှာ စိုးသီဟ ရောက်လာပြီး မီးဖိုချောင်မှာ အလုပ်များနေတဲ့အချိန် စိုးသီဟက နည်းနည်းလေးအင်အားသုံးပြီး တက်လိုးသွားခဲ့တာပါပဲရှင်။ ကျမ အစက ငြင်းဆန်ရုန်းကန်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမစောက်ဖုတ်ကို တေ့မိ လိုက်တဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျမကိုယ်တိုင်က သူလိုးတာကို အလိုတူအလိုပါ ခံခဲ့မိတာပါရှင်။ သူ့လီးကြီးကို ဟိုတုန်း က ထိတွေ့ခဲ့ဖူးတာကြောင့် တကယ့်စောက်ဖုတ်ကိုဖြဲပြီး လိုးသွင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်ရောက်တော့ ကျမကိုယ်တိုင် အားရပါးရကြီး ကို ဖြဲကားခံခဲ့မိပါတော့တယ်။ အဲဒီနေ့က မီးဖိုချောင်ကြမ်းပြင်မှာပဲ စိုးသီဟက ကျမကို ပက်လက်လှန်ပေါင်ကားခိုင်းပြီး တက်လိုးသွားတာကို ခံခဲ့ရ ပါတယ်။ သူက မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ သူလည်းပြီး ကျမလည်းပြီးအောင် တက်သုတ်ရိုက်လိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ စိုးသီဟ အခွင့်သင့်တိုင်း ကျမကို ဖြုတ်တော့တာပါပဲရှင်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျမသား မင်းမင်းကလည်း အဲ ဒီရက်တွေမှာ အိမ်ပြန်မလာတဲ့ရက်တွေ တော်တော်များပါတယ်။ စိုးသီဟကို မေးကြည့်တော့ ဆော်ကြီးတစ်ဗွေနဲ့ ငြိပြီး အဲဒီ ဆော်ကြီး ခရီးထွက်သွားတဲ့နောက်ကို ပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကျမသားကို ကျမပြောလို့ မနိုင်ဘူးလေ။ နောက်ပြီး သား က ကိုယ့်စီးပွားကိုယ်ရှာပြီး ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားနေတဲ့သူဆိုတော့ ကျမရဲ့စကားကို သားက သိပ်ပြီး အလေးမထားတော့တာ လည်း ပါတာပေါ့ရှင်။ သားပြန်မလာတဲ့ရက်တွေမှာ ညတိုင်းလိုလို စိုးသီဟက အိမ်ကိုလာပါတယ်။ ကျမသမီး အိပ်တဲ့အချိန် ပေါ့ရှင်။ စိုးသီဟက ကျမကို နောက်ဖေးတံခါးကို ဖွင့်ခိုင်းထားတယ်။ သူလာချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီတံခါးကနေ ဝင်လာပြီး ကျမ ကို နှိုးတယ်။ ပြီးရင် တစ်ဖက်ခန်းက ကျမသား မင်းမင်းအိပ်တဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ ကျမကို လိုးတော့တာပါပဲ။ ကျမကလည်း မွှန် နေပြီလေ။ လီးပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကာမမှာဆရာတစ်ဆူလိုကျွမ်းကျင်လှတဲ့ စိုးသီဟနဲ့တွေ့ပြီး စိုးသီဟ ပြုသမျှနုရတဲ့ အခြေ အနေရောက်ခဲ့ရတာပေါ့ရှင်။
စိုးသီဟကို ကျမ အစွဲကြီးစွဲမိသွားတာပါ။ သူနဲ့တွေ့မှ ကျမဘဝမှာ နှစ်နှစ်ဆယ်လောက် ပေါင်းခဲ့ ဖူးတဲ့လင်ကိုတောင် မလုပ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးတွေနဲ့ စိုးသီဟ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင် လိုက်လုပ်ပေးခဲ့မိတဲ့အထိ စိုးသီဟကို ကျမ စွဲလမ်းမိခဲ့တာပါ။ အခုလည်း ထုံးစံအတိုင်း ကျမသား မင်းမင်းမရှိတော့ သူ့အိပ်ခန်းထဲမှာ စိုးသီဟနဲ့ ကျမ ချိန်းတွေ့နေကြတာပေါ့ရှင်။ “ ဟင့်….မောင်လေး….သွင်းတော့လေကွာ….အဲလိုကြီး စောက်စိကို လီးနဲ့ကော်ကော်ထိုးနေတော့ စောက်စိက တအားကျင်လာပြီ….” စိုးသီဟက ကျမရဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲခိုင်းထားပြီး ဒကောက်ခွက်ကိုလက်နဲ့ ဆွဲကိုင်ခိုင်းထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျမ ဟာ ပက်လက်အနေအထားနဲ့ ပေါင်ကြီးနှစ်ဖက်ကို ဖြဲကားပေးထားနေရတဲ့အနေအထား ရောက်နေရတာပေါ့ရှင်။ သူက ကျမ ရဲ့ ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး ပေါင်ဖြဲပေးထားလို့ ပြဲအာနေတဲ့ ကျမစောက်ပတ်ကြီးကို သူ့လီးဒစ်ကြီးနဲ့ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ထိုးတိုက် ပွတ်နေတော့ ကျမမှာ မရိုးမရွနဲ့ လူးပျံနေရတာပေါ့ရှင်။
ကျမအောက်မှာ လူးပျံနေတာကိုမြင်တော့ စိုးသီဟ အတော်လေး သဘောကျနေပုံပါပဲ။ ဒီကြားထဲ ကျမရဲ့ အင်္ကျီရင်ဘတ်ကြယ်သီးတွေကိုဖြုတ်ထားတော့ ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ ကျမ ရဲ့ ရင်အစုံကိုလည်း သူကတစ်ခါတစ်ခါလှမ်းဆွဲပြီး ညှစ်ပေးနေပြန်ပါသေးတယ်။ ကျမ မနေနိုင်အောင် ရွထနေရပါပြီ။ စောက် ဖုတ်ထဲမှာလည်း စောက်ရည်ကြည်တွေက ဒလဟောကို စိမ့်ထွက်နေတာကြောင့် သူ့လီးကြီးနဲ့ ထိုးတိုက်ဖိပွတ်နေတဲ့အခါ တ ပြစ်ပြစ်နဲ့ အသံတွေကို ထွက်ပေါ်နေရပြန်ပါတယ်။ “ ဟင့်…မောင်….မောင်ရယ်….လိုးပါတော့ကွာ….မမ တအားရွနေပြီ…သိရဲ့လား….” ကျမ မရှက်မကြောက်နဲ့ စိုးသီဟကို လိုးပေးဖို့ တောင်းပန်မိပါတော့တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်လူမြင်ကွင်းတွေမှာ စိုးသီဟ က ကျမကို ရိုးရိုးတန်းတန်း အစ်မလို့သာ ခေါ်ပေမယ့် နှစ်ယောက်သားတွေ့ဆုံလိုးကြတဲ့ အချိန်မှာဆို စိုးသီဟက ကျမကို ‘ မမချော ’ လို့ ခေါ်လေ့ရှိပြီး အလိုးခံမိတဲ့အချိန်မှာတော့ ‘ မောင် ’ လို့ ခေါ်မိပါတယ်။
စိုးသီဟနဲ့တွေ့မှ ကျမလည်း အရှက်ကုန် ရတယ်လို့ ပြောရမလိုပါပဲရှင်။ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းတစ်တစ်ခွခွစကားတွေကို အလိုးခံရင်းပြောတတ်လာတယ်။ တစ်ခါမှပြော မထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အပြောအဆိုအသုံးအနှုန်းတွေကို ပြောမိလာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကျမ လီးစုပ်တတ်လာတာပဲရှင်။ ကျမရဲ့လင်သားကိုတောင် တစ်ခါမှလီးမစုပ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ကျမ စိုးသီဟနဲ့တွေ့မှ ကျမလီးစုပ်ချင်လာအောင် လီးစုပ်တတ်သွား အောင် သူက ဖြားယောင်းသိမ်းသွင်းခိုင်းစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူကလည်း မိန်းမတွေရဲ့အထာကို ကောင်းကောင်းနပ်သူမို့ သူ့ရဲ့ စေခိုင်းမှုတွေအောက်မှာ ကျမ ငြင်းမရနိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲရှင်။ အဲဒီတုန်းက စိုးသီဟက ကျမကို လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးပုံစံနဲ့ တက်လိုး နေတဲ့အချိန်ပါ။ သူ့ဖင်ကို ကြွကြွပြီး ဆောင့်ချလိုးလိုက်တိုင်း ကျမဟာ နင့်ကနဲနင့်ကနဲနေအောင် ခံရတာကောင်းလွန်းလို့ တ ဟင်းဟင်းနဲ့ငြီးပြီး ကျမရဲ့ရင်အစုံကို ကော့ကော့တင်ပြီး အလိုးခံနေမိပါတယ်။ “ အင်း….ဟင်း…ဟင်း…ကျွတ်…ကျွတ်….အင်း….ဟင်း….” “ မမချော….ကောင်းလား….” စိုးသီဟက အလိုးအဆောင့်မပျက် ကျမကိုမေးပါတယ်။
ကျမခေါင်းကိုညိတ်ပြပြီး ဖင်ဆုံကြီးကိုလည်း ကော့ကော့ ပေးနေမိပါတယ်။ ရင်အစုံကလည်း ကော့တင်ပေးနေမိတော့ ကျမရဲ့နို့အုံကြီးတွေဟာ မို့မောက်တက်နေတာပေါ့ရှင်။ စိုးသီဟ က ကျမနို့ကြီးတွေကို လက်ဝါးနဲ့အုပ်ကိုင်ပြီး ခပ်တင်းတင်းညှစ်ဆွဲရင်း ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးပေးနေပါတယ်။ ကျမ တော်တော် ကို ဖီးလ်တက်နေမိတာပါ။ နှုတ်ကနေတရှီးရှီးနဲ့ အသံထွက်အောင်ငြီးမိပြီး အလိုးခံရတဲ့ ကာမအရသာကို ခံစားနေမိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ စိုးသီဟက ကျမပါးစပ်ပေါက်ထဲကို သူ့ရဲ့လက်နှစ်ချောင်းပူးကာ ထိုးသွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ “ ပြွတ်….ပြွတ်…အွန်း….ဟင်း….ဟင်း….ပြွတ်….” ကျမပါးစပ်ထဲဝင်လာတဲ့ လက်နှစ်ချောင်းကို ကျမ အငမ်းမရနဲ့ စုပ်ယူနေမိပါတယ်။ မိန်းမတိုင်း စောက်ဖုတ်ထဲ လီး သွင်းအလိုးခံနေရတဲ့အချိန်မှာ အခုလို ပါးစပ်ထဲလက်ညိုးတို့ လက်ခလယ်တို့ လာထည့်ရင် အငမ်းမရနဲ့ကို စုပ်ယူတတ်ကြတာ ချည်းပါပဲ။ မယုံရင် ရှင်တို့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို လိုးနေရင်း အဲဒီမိန်းမဖီးလ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ကြည့်။
သေချာပေါက် ကို အငမ်းမရနဲ့ကို စုပ်ယူလိမ့်မယ်။ ကျမ အဲလိုအငမ်းမရဖြစ်နေပုံကို စိုးသီဟက အပေါ်စီးမှ လိုးဆောင့်ရင်းနဲ့ စီးမိုးကြည့်ပြီး သဘောအကျကြီး ကျလို့နေပါတယ်။ ကျမ မရှက်နိုင်တော့ပါဘူး။ အရမ်းကို ဖီလင်တက်ပြီး အလိုးခံလို့ ကောင်းနေတာကိုး ရှင့်။ “ မမချော…ကျနော် လိုးပေးတာ ခံလို့ ကောင်းရဲ့လား….” အင်း….ဟင်း ကျမ သူ့ရဲ့လက်နှစ်ချောင်းပူးကို စုပ်ရင်း မပီမသအသံနဲ့ ပြန်ဖြေမိပါတယ်။ “ ကျနော့် လက်ချောင်းတွေကို အလိုးခံနေရင်း စုပ်နေရတာ ကြိုက်လား….” ကျမ ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြန်ဖြေမိပြန်ပါတယ်။ “ မမချော….လီးစုပ်ဖူးလား…” “ ဟွန့်အွန်း….” ပါးစပ်ထဲက လက်တွေကို အစုပ်ရပ်ပြီး ကျမ ပြန်ဖြေရပါတယ်။ ကျမမှာ တကယ်လည်း လီးမစုပ်ခဲ့ဖူးတာကိုး။ လီးစုပ် တယ်ဆိုတာကို စကားအဖြစ်သာ ကြားဖူးနေခဲ့ပြီး တစ်ခါဘူးကမှ မစုပ်ဖူးဘူးလေ။ “ အခု ကျနော်လိုးပေးနေရင်း ပါးစပ်ထဲက လက်နှစ်ချောင်းကို လီးလို့သဘောထားပြီး စုပ်ကြည့်စမ်း….မမချော ပိုပြီး အရသာတွေ့လာလိမ့်မယ်….။
လီးကြီးကို စုပ်နေတယ်လို့ တွေးပြီး စုပ်ကြည့်စမ်း…. အင့်…ဟင့်…ဟင်း… စိုးသီဟက ကျမရဲ့စိတ်တွေကို အစွမ်းကုန်ထန်ပြင်းလာအောင် စကားလုံးတွေနဲ့ နှူးဆွပြီး ကျမပါးစပ်ထဲက လက်နှစ် ချောင်းပူးကိုလည်း ကျမပါးစပ်ထဲ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လိုးသလို လှုပ်ရှားပေးနေပါတယ်။ စောက်ဖုတ်ထဲ ကိုလည်း ခုနက လိုးနေဆောင့်နေတဲ့အရှိန်ထက်ပြင်းတဲ့ ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးပါတော့တယ်။ ကျမမှာ စောက်ဖုတ်ထဲ နင့်နင့်နဲနဲဝင်လာတဲ့ လီးကြောင့် ပူထူကျင်ဆိမ့်ပြီး အရသာကောင်းလွန်းလို့ စိုးသီဟပြောတဲ့အတိုင်း သူ့လက် နှစ်ချောင်းကို လီးအမှတ်နဲ့ အငမ်းမရတပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင် စုပ်ပေးနေမိပါတော့တယ်။ စိုးသီဟကလည်း ကျမအရမ်းဟော့ နေပြီမှန်းသိတော့ ပြင်းထန်အားပါတဲ့ ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ ပက်ပက်စက်စက်မညှာတမ်းကို ဆောင့်လိုးပါတော့တယ်ရှင်။ စိုးသီဟ ဆောင့်ချက်တွေက အားပါပြီး ပြင်းထန်လွန်းလှတာကြောင့် သူ့လီးရှည်ရှည်ကြီးထိပ်က ဒစ်ထိပ်ကြီးနဲ့။
ကျမသားအိမ် ကို တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ လာထိုးတိုက်နေပါတယ်။ ကျမလေ မျက်စိကိုစုံမှိတ်ပြီး စိုးသီဟ လက်ကို လီးတစ်ချောင်းအဖြစ်မြင်ယောင် ခံစားပြီး အငမ်းမရစုပ်နေရင်း စောက်ဖုတ်ထဲက လီးကိုလည်း အတွင်းသားတွေနဲ့ အတင်းဆွဲညှစ်ပေးနေမိပါတယ်။ “အ….မမချောရာ….ကျနော့် လီးကို ဆွဲညှစ်ပေးထား….လုပ်….လုပ်….ဖင်ကြီးကိုလည်း ကော့ ကော့ပေး….ဟုတ်ပြီ….အ….အီး…..အ….” စိုးသီဟ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေတဲ့အသံ၊ ကျမ အငမ်းမရနဲ့ ဏှာထန်ပြီး လက်ကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုပ်ယူနေမိတဲ့အသံ၊ စိုးသီဟတစ်ယောက် ဖီလင်တွေတက်ပြီး ညည်းညူအော်ဟစ်နေတဲ့အသံတွေက တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်နဲ့ အခန်းထဲမှာ ထွက် ပေါ်နေပါတယ်။ ခဏကြာတော့ စိုးသီဟရဲ့ခါးက ဆတ်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ကျမစောက်ခေါင်းထဲ ပူခနဲ ဖြစ်သွားကာ သူ၏ လရည် တွေကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျမ စောက်ခေါင်းတစ်လျှောက် ပူနွေးသွားတဲ့အတွေ့၊ သူ့ရဲ့ အဆုံးသတ်ဆောင့် ချက်ပြင်းပြင်းကြောင့် ကျမလည်း တစ်ချီပြီးသွားရပြန်ပါတယ်။
စိုးသီဟက တစ်ချီပြီးသွားတော့ ကျမဘေးမှာ အမောဖြေဝင်လှဲ ရင်း ခဏနားနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တစ်ဖက်က ကျမရဲ့နို့အုံထွားထွားကြီးတစ်ဖက်ပေါ်ကိုတင်ပြီး ကျမနို့သီးခေါင်းထွား ထွားကြီးတွေကို ကိုင်ကစားလို့နေပါသေးတယ်။ ကျမ စိုးသီဟရဲ့ ရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်လိုက်ပြီး သူ့ကိုဖက်ထားလိုက်မိပါတယ်။ ကျမ သူ့ကို အရမ်းစွဲလန်းပြီး ချစ်မိနေတာကိုးရှင့်။ “ မမချော….ပြီးသွားရဲ့လား….” “ အို…ဘာတွေလာမေးနေတာလဲ….မသိဘူး…သွား….” ကျမရှက်သွားရပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲခေါင်းကို တိုးဝင်နေမိပါတယ်။ သူက ကျမရဲ့လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး သူ့လီးကို ကိုင်ခိုင်းပြန်ပါတော့တယ်။ ကျမကလည်း မကိုင်ချင်ကိုင်ချင်ပုံစံနဲ့ပဲ စိတ်ပါလက်ပါ ကိုင်ပေးနေမိပြန်ပါတယ်။ “ မမချော….ကျနော် လိုးပေးတာ ကောင်းရဲ့လား….” “ အို…မောင်ကလည်း….” “ ဖြေနော်….မဖြေရင် နောက်တစ်ခါ တက်လိုးပစ်လိုက်မှာ….” “ အင်း….အင်း….ကောင်းတယ်….ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး….လူကို သိပ်အနိုင်ကျင့်တာပဲ….အရမ်းဆိုးတယ်….”။
ကျမ ရှက်ရွံ့သလိုလေးဖြေရင်း သူ့ကို ချစ်စနိုးနဲ့ အပြစ်တင်စကားဆိုမိပါတယ်။ သူနောက်တစ်ခါ ထပ်လိုးမှာကို အပြစ်မြင်တာ မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ နောက်တစ်ခါထပ်လိုးမယ်ဆိုလည်း ကျမခံအုံးမှာပါပဲ။ “ မမချော….ကျနော့်ကို လီးစုပ်ပေးပါလား….” “ အာ….မစုပ်ချင်ပါဘူး….တစ်ခါမှလည်း မစုပ်ဖူးဘူး….” “ လုပ်ပါ မမချောရာ….စုပ်ပေးပါ….ကျနော် မချော နှုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့ စုပ်ပေးတာကို ခံချင်လို့ပါ….” စိုးသီဟက ကလေးတစ်ယောက်လို ကျမကို ပူဆာလို့နေပါတယ်။ ကျမနို့ကြီးတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်၊ ကျမ တင်သား ကြီးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်လိုက်နဲ့ အတင်းကို လီးစုပ်ခိုင်းနေပါတော့တယ်။ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ လီးစုပ်ဖို့ကို စိတ်ပါလာသလိုဖြစ်လာရပါတယ်။ ခုနအလိုးခံနေရင်း သူ့လက်နှစ်ချောင်းကို လီးအမှတ်နဲ့ အားပါးတရစုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖီလင်ကို ပြန်အမှတ်ရပြီး နောက်ဆုံးတော့ သူ့သဘောဆန္ဒအတိုင်း လီးစုပ်ပေးဖို့ လိုက်လျောမိပါတော့တယ်ရှင်။
“ မင်း….တော်တော်ဆိုးတယ်သိလား….မမ အဲလို တစ်ခါမှလုပ်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး….” “ အင်းပါ…မမချောရာ…ကျနော့်ကိုချစ်ရင် စုပ်ပေးပါတော့နော်….” နောက်ဆုံးတော့လည်း ကျမ သူ့လီးကို ပါးစပ်ထဲငုံပြီး မစုပ်တတ်စုပ်တတ်နဲ့ စုပ်ပေးမိတော့တာပါပဲ။ အဲဒီနောက်မှာ တော့ စိုးသီဟက လီးစုပ်ခံရင်း ကျမကို လီးစုပ်နည်းတွေသင်ပေးရင်း သူ့စိတ်ကြိုက်ကို စုပ်ခိုင်းပါတော့တယ်။ အဲဒီကစလို့ စိုးသီဟက ကျမကို လာလိုးတိုင်း သူ့လီးကို ကျမကိုယ်တိုင်က စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ဆွဲစုပ်မိတော့တာပါပဲရှင်။ အခုလည်း သူ့ကို ကျမလီးစုပ်ပေးပြီးလို့ အလိုးခံဖို့ ပက်လက်လှန်ပေါင်ဖြဲပြီး ဒကောက်ခွက်ကို ဆွဲမကာ စောက်ဖုတ်ကြီးကို အစွမ်းကုန်ကော့ တင်ဖြဲကားပေးထားတာပါ။ ဒါကို သူက မလိုးပေးသေးဘဲ ကျမ စောက်ဖုတ်ပြဲပြဲကြီးကို သူ့လီးဒစ်ကြီးနဲ့ ထိုးတိုက်ပွတ်ဆွပြီး ကျမရဲ့ ရမက်ဆန္ဒတွေကို ထကြွသထက်ထကြွအောင် ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ “ မောင်….လိုးထည့်လိုက်ပါတော့ မောင်ရယ်….မမ စောက်ဖုတ်ထဲ မင်း လီးကြီးကို လိုးထည့်လိုက်ပါတော့….။
အဟင့် …ဟင့်….မမ မနေတတ်တော့ဘူး….ဟင်း….လိုးပါတော့နော်….” ကျမ ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ပါဘူးရှင်။ လီးစုပ်ပေးနေတုန်းကတည်းက စိတ်တွေထကြွနေခဲ့ခြင်းကြောင့် အလိုးခံ မည့်အချိန်ရောက်ပြန်တော့ မလိုးပေးသေးဘဲ ရွထနေအောင် ဆွပေးနေလေတော့ ကျမနှုတ်က မရှက်မကြောက်နဲ့ပဲ လိုးပေး ဖို့ တစ်တစ်ခွခွဖွင့်ဟပြောပြီး တောင်းဆိုလိုက်မိပါတော့တယ်။ ကျမရဲ့ အငမ်းမရ ဏှာထန်နေတဲ့ပုံနဲ့ တစ်တစ်ခွခွစကားသံကို ကြားရမြင်ရတော့မှ စိုးသီဟက သူ့လီးကြီးကို ကျမစောက်ခေါင်းပေါက်ဝသို့တေ့ပြီး တရှိန်ထိုးဆောင့်လိုးသွင်းပစ်လိုက်ပါ တော့တယ်ရှင်….။ “ ဖွတ်…ဒုတ်….” “ အ…ဟင်း….မောင်ရယ်….”သားဖြစ်သူ မင်းမင်းမရှိတုန်း စိုးသီဟနဲ့ ထင်တိုင်းကြဲနေမိတဲ့ကျမ မထင်မှတ်ဘဲ သားပြန်ရောက်လာတော့ ကိုယ်ရှိန် သတ်ရပါတော့တယ်။ အိမ်ထောင်သည် မိန်းမ၊ လင်ရှိတဲ့မိန်းမတွေကိုတောင် ကြာခိုနေတဲ့ စိုးသီဟကလည်း အတွေ့အကြုံရင့် ကျက်သူပီပီ ဘယ်သူမှမရိပ်မိအောင် ကျမထက်တောင် ဟန်ဆောင်ကောင်းနေပါသေးတယ်။
ကျမကို မသိကျိုးကျွံပြုပြီး ခပ် တန်းတန်းနဲ့ ဆက်ဆံနေခဲ့ပါတယ်။ ကျမသား မင်းမင်းက အိမ်ကို ပြန်လာတာ တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးရှင့်။ မိန်းမပါ ခိုးလာ တာပါ။ လှယဉ်မင်း….တဲ့။ နာမည်က အပျံစား။ လူကလည်း အမိုက်စားပါပဲ။ လှယဉ်မင်းက ကျမထက် (၁၀)နှစ်ပဲ ငယ်ပါ တယ်။ သားထက်ဆို (၁၀)နှစ်နီးပါးကြီးတာပေါ့။ လူက အရပ်အမောင်းကောင်းပြီး တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ရွှေဘိုမင်း ကြိုက် အဆက်အပေါက် ပိုင်ရှင်ပေါ့ရှင်။ ကျမရဲ့ အချိုးအစားနဲ့ဆို သိပ်တောင် မကွာလှပါဘူး။ လှယဉ်မင်းက ဆိုရှယ်ကျ တယ်။ ပေါင်းသင်းပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ပွင့်လင်းတယ်။ ကျမရဲ့သားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူဆိုတော့ ကျမနဲ့ ချွေးမတော် နေပေမယ့် ကျမကို “ အစ်မ ” လို့ပဲ ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုပါတယ်။ ကျမကို ယောက္ခမတစ်ယောက်ပုံစံမျိုး ရှိန်နေတာမျိုး မရှိပါဘူး ရှင်။ သားက ကျမကို မိခင်တစ်ယောက်လို မဆက်ဆံဘဲ သူငယ်ချင်းပေါင်း ပေါင်းတာဆိုတော့ ထွေလီကာလီတွေ ပြောခြင်း မရှိကြတော့ဘဲ လှယဉ်မင်းကို သားရဲ့မိန်းမအဖြစ်နဲ့ အသိအမှတ်ပြုပြီး နေနေခဲ့ကြပါတော့တယ်။
ကျမတို့မိသားစုက ကျမရဲ့ ခင်ပွန်းဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းပေါင်း ပေါင်းကြကာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြသဖြင့် သားအမိဆက်ဆံရေး ယောက္ခမ နဲ့ ချွေးမဆက်ဆံရေးတွေ မရှိကြတော့တာပါ။ ကျမသား မင်းမင်းကလည်း အပြင်ကို မထွက်တော့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့အသစ်စက်စက် မယားအနားမှာ အချိန်ပြည့်ကပ်နေ တော့တာပါပဲရှင်။ သားရှိနေတာကြောင့် ကျမမှာ စိုးသီဟနဲ့လည်း မတွေ့ဖြစ်တော့ပါဘူး။ သားမရှိတဲ့အချိန်တွေတုန်းက စိုးသီဟနဲ့ သောင်းကျန်းခဲ့ကြတာကို ပြန်စဉ်းစားရင်း အိပ်မပျော်နိုင်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရပါတော့တယ်။ ကျမမှာ သားဖြစ်သူ ကြောင့် ကာမငတ်မွတ်မှုကို ခံစားနေရသည့်အပြင် နောက်ထပ်ဒုက္ခတစ်မျိုးကိုလည်း ခံစားနေရပြန်ပါသေးတယ်။ မင်းမင်းက အခုမှ အသက်(၁၈)နှစ်သာသာရှိသေးတဲ့ လူပျိုပေါက်။ ယူလာတဲ့ မိန်းမက သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး အဆက်အပေါက် အရမ်း တောင့်တဲ့မိန်းမ။ အဝတ်အစားတွေ အောက်မှာတောင် ရုန်းကြွချင်နေတဲ့ လှယဉ်မင်းရဲ့ နို့အုံကြီးတွေ။တင်သားကြီးတွေက ကျမသားကို အရူးအမူးဖြစ်စေတဲ့ပုံပါပဲ။
နေ့ခင်းကြောင်တောင် လှယဉ်မင်းအနားကပ်ပြီး ဟိုနှိုက်ဒီနှိုက်၊ ဟိုပွတ်ဒီပွတ်တွေ လုပ်လား လုပ်ရဲ့၊ တခါတရံ အိပ်ခန်းတံခါးမပိတ်ကြဘဲ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နေကြနဲ့ နေတာထိုင်တာ မဆင်ခြင်ကြပါဘူး။ ပိုဆိုး တာက ညဘက်တွေမှာပါ။ ကျမကလည်း ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ် အိပ်မပျော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်။ ကျမတို့အခန်းနဲ့ သုံးထပ်သား တစ်ချပ်သာခြားတဲ့ ဘေးအခန်းက မင်းမင်းတို့ လင်မယားကြောင့် ကျမမှာ အနေရပိုခက်စေရပါတယ်။ ကျမသမီးငယ်က တော့ ဘာသိမှာလဲရှင်။ ကျမနဲ့ စိုးသီဟ သားဖြစ်သူ မင်းမင်း မရှိတုန်း အဲဒီအခန်းထဲမှာ မီးကုန်ယမ်းကုန်လိုးကြဆော်ကြတာ တောင် မနိုးတဲ့ဥစ္စာ။ ကလေးပီပီ တချိုးထဲ အိပ်တာပေါ့။ ကျမမှာသာ သူတို့အခန်းထဲကအသံတွေကိုကြားပြီး ဒုက္ခပိုရောက်နေ ရတာပေါ့ရှင်။ ကျမတို့သားအမိနှစ်ယောက် အိပ်ခန်းထဲဝင်ပြီး မီးမှိတ်လိုက်တာနဲ့ မကြာဘူး မင်းမင်းနဲ့ လှယဉ်မင်းတို့လည်း သူတို့ အခန်းထဲဝင်ကြတော့တာပါပဲ။ ပြီးရင် ကျမကို ဒုက္ခပေးမယ့်အသံတွေကြားရတော့တာပါပဲရှင်။
ကျမကလည်း အစကတည်းက လောင်ချင်နေတဲ့ မီးလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန် သူတို့အခန်းထဲက အသံတွေက ကျမရဲ့ရမက်မီးကို လောင်စာကျွေးနေသလိုဖြစ်နေရ ပါတယ်။ ကျမချွေးမ လှယဉ်ကျေးက ကြည့်ရတာ ဇရက်တောင်ပံကျိုးမနဲ့ တူပါတယ်။ မိန်းမချင်းသိတာပေါ့ရှင်။ ဘယ်သူဌေး ရဲ့ မယားငယ်လုပ်ပြီး ငွေတွေချူစားရင်း ကျမသားလို နုနုထွဋ်ထွဋ်လေးကို အမ်းကုန်းလုပ်ပြီး အပိုင်ချည်ထားလိုက်တဲ့ပုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျမ စိတ်ထဲမှာက ကျမသားအတွက် စိတ်ပူခြင်းမရှိတာ အမှန်ပါ။ အတိုင်းသားကြားနေရတဲ့အသံတွေက ကျမကို စိတ်ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်စေရသလို ကျမရဲ့ချွေးမ လှယဉ်မင်းရဲ့ ကာမမှုအတွေ့အကြုံနဲ့ ဝါတို့ကို ကျမ သိနိုင်လောက်တဲ့အ ထိ ကျမသားနဲ့ ချွေးမက အထိန်းအကွပ်မရှိ သောင်းကျန်းလွန်းလှပါတယ်။ “ ခစ်….ခစ်….မောင်ကလည်း….အို….အ…ဟိတ်….စောက်စိကို အရမ်းမစုပ်နဲ့လေ…အိုး…ယားတယ်….အ…ဟင့်.. …မောင်…အင်း….ဟင်း….မောင်ရယ်….မောင့် လျှာကြီးက….အ…အိုး….အမလေး….မောင်….အင်း…စောက်ခေါင်းထဲထိ ယက်ပေးကွာ….ဟင့်….ဟုတ်ပြီ….အ…ဟင့်….အ…အား….မောင်ရယ်….” ။
တစ်ဖက်ခန်းကအတွဲက ဘေးခန်းမှာ အမေတစ်ယောက်လုံးရှိနေတာကိုတောင် ဂရုပြုကြပုံမပေါ်ဘဲ သောင်းကျန်း နေကြပါတယ်။ အသံတွေကြောင့် သားဖြစ်သူ လှယဉ်မင်းရဲ့စောက်ဖုတ်ကို အပီအပြင်ယက်ပေးနေကြောင်း ကျမရိပ်စား လိုက်မိပါတယ်။ ကျမသားအတွက် ရင်နာနေရမယ့်အစား ကျမစိတ်တွေက သွေးသားတွေ လှုပ်ခတ်ပြီး ကာမစိတ်တို့ ဟုန်းခနဲ ထကြွလာရပါတယ်။ စိုးသီဟ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ပေါ့ရှင်။ ကျမကို စောက်ဖုတ်ယက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စကား ကြောင့်ပေါ့။ စိုးသီဟက ကျမကို အခုချိန်ထိတော့ မယက်ပေးဖူးသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမမှာတော့ စိုးသီဟရဲ့ စောက်ဖုတ် ယက်ပေးမှုကို ဘယ်တော့များ ခံစားရမလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အမြဲရင်ခုန်နေခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိုးသီဟ ကျမကိုလာလိုးတိုင်း သူ့လီးကိုသာ စုပ်ခိုင်းပြီး တက်လိုးသွားတတ်တာကြောင့် ကျမမှာ စောက်ဖုတ်အယက်ခံရတဲ့ အရသာကို မခံစားဖူးသေးပါ ဘူး။
ထို့ကြောင့် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီး ကျမသားက လှယဉ်မင်းကို စောက်ဖုတ်ယက်ပေးနေတဲ့အသံကြားရတော့ အလိုလို ဖီလင်တက်ပြီး ကာမစိတ်တွေ ထကြွနေရတော့တာပါ။အင်း….ဟင်း…မောင်….မောင်ရယ်….ချစ်လိုက်တာကွယ်….ဟင့်….ထိုးထည့်စမ်းပါ….မောင့်လျှာကြီးကို မမ စောက်ခေါင်းထဲ ထိုးထည့်စမ်းပါ….အင်း….ဟင်း….အ…ရှီး….ကျွတ်….ကျွတ်….ကောင်းလိုက်တာ….မောင်ရယ်….အင်း…. ဟင်း….” တစ်ဖက်ခန်းက အသံသဲ့သဲ့က ကျမနားထဲကို တရှိန်ထိုးဝင်နေပါတယ်။ ကျမ မနေနိုင်တော့ပါဘူးရှင်။ အိပ်ယာက အ သာထပြီး နံရံကို နားနဲ့ ဖိကပ်ရင်း အစွမ်းကုန်နားစွင့်ထားမိပါတယ်။ သူတို့အခန်းရှေ့မှာ သွားချောင်းရင် မသဲမကွဲတော့ မြင် နိုင်ပေမယ့် မသင့်တော်ဘူးလေ။ ကျမရဲ့သား သူ့မိန်းမကိုလိုးမှာကို အမေလုပ်တဲ့သူက ချောင်းကြည့်လို့ ဘယ်သင့်တော်ပါ့မ လဲ။ ဒါကြောင့် အသံတွေကိုပဲ နားထောင်ခံစားပြီး ကိုယ့်ဘာသာဖီလင်ယူဖို့ပဲ ကြိုးစားနေရတာပေါ့ရှင်။
“ မောင်…မောင်….အ…ယက်…နာနာတယ်….အ…မမ ထွက်ခါနီးပြီ….အ…ဟင့်…အ…အီး…မောင်….မခွာလိုက်နဲ့ နော်….မမ စောက်ဖုတ်ကို ငုံစုပ်ထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်…..။အ….ဟင့်….ဟင်း….အရည်တွေ ထွက်တော့မယ်မောင်… အ…ထွက်ပြီ…ထွက်ပြီ….စုပ်….ခပ်ပြင်းပြင်းစုပ်….အ…အား….ဟင်း….” ။ကျမချွေးမ လှယဉ်မင်းရဲ့ အော်ဟစ်ညည်းတွားပြီး ကာမဖီလင်တက်နေသံတွေက အရမ်းကို တစ်တစ်ခွခွရှိလှပါ တယ်။ နောက်ပြီး ကျမသားကိုလည်း သူမက ကာမမှုမှာ ဦးဆောင်ထားပုံပါပဲ။ ကျမအတွေးအာရုံထဲမှာတော့ လှယဉ်မင်းက စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဖြဲပေးထားပြီး ကျမသား ယက်ပေးနေတာကို ဖြဲကားခံပြီး စောက်ရည်တွေထွက်လာလို့ ကျမသားကို ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ခိုင်းနေပုံကို မြင်ယောင်နေမိပါတယ်။ လှယဉ်မင်းက အတော်ကို ဏှာထန်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျမ သိလိုက်ရပါ တယ်။ နောက်ပြီး ကာမဆန္ဒအရမ်းကို ပြင်းပြပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း၊ ခပ်ဆန်းဆန်းပုံစံတွေနဲ့ ကာမအရသာကို ခံစားရတာ သဘောတွေ့ပုံပါပဲရှင်။
ဒါကြောင့်လည်း အမြဲတန်းလိုလို လီးတောင်နေတတ်တဲ့ လူပျိုပေါက်အရွယ်လေးကို အပိုင်ကိုင်လိုက် တာပဲလို့ ကျမတွေးမိလိုက်ပါတယ်။ ကျမ စိတ်ထဲမှာ လှယဉ်မင်းတစ်ယောက် အခုလို ကာမအရသာခံစားတာကို နားလည် စာနာပေးနေမိရုံမက အားကျသလိုပင် ခံစားနေရပါတယ်။ လှယဉ်မင်း ခံစားရသလို စောက်ဖုတ်အယက်ခံသည့်အရသာကို လည်း ကျမ ခံစားနေချင်မိပါတယ်။ ကျမရဲ့လင်အသစ်ကလေး စိုးသီဟ ယက်ပေးတာကိုပေါ့ရှင်။ တစ်ဖက်ခန်းထဲက အသံ တွေက ခဏတော့ ငြိမ်သွားတယ်။ ခပ်တိုးတိုးစကားပြောသံကိုတော့ ကြားလို့နေရပါတယ်။ “ မမ…လီးစုပ်ပေးမယ်ဆို….” “ အင်းပါ…မောင်ရဲ့…မမ မောသွားလို့ပါ….ဒါနဲ့ မောင်….” “ ဘာလဲ…မမ…” “ မမ…စောက်ဖုတ်ထဲက ပြီးသွားတဲ့အရည်တွေကို မောင်…မြိုချလိုက်တာလား….ဟင်…” “ အင်းလေ….မမ ရဲ့….မမ အရည်တွေက မောင့် ပါးစပ်ထဲ အကုန်ဝင်ကုန်တာလေ….” “ မောင်ရယ်….အရမ်းချစ်သွားပြီသိလား…ရွှတ်….”။
“ စုပ်ပေးတော့ မမရာ….မောင့်လီးက အရမ်းတောင်နေပြီ….ပြီးရင်လည်း လိုးရအုံးမှာ….” ကျမသားနဲ့ ချွေးမတို့ရဲ့ ပြောစကားသံတွေက ပွင့်လင်းပြီး တစ်တစ်ခွခွရှိလှပါတယ်။ ကြားနေရတဲ့ကျမ ရမက်စိတ်ကို မထိန်းနိုင်အောင် ထကြွစေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို စင်းလိုက်ပြီး ကားထားလိုက်ပါတယ်။ပြီး တော့ ထဘီကိုလှန်ပြီး ကိုယ့်စောက်ဖုတ်ကိုယ် ပြန်ပွတ်ပေးနေမိပါတော့တယ်။ အင်း….ဟင်း….မောင်…အရမ်းကော့မတင်နဲ့ကွာ.. ..မောင် ပင့်ကော့လိုက်တော့….မမ အာခေါင်ကို မောင်းလီးဒစ်ကြီးက လာထိုးရင် ပျို့ပျို့သွားရော…စုပ်ရတာ အဆင်မပြေ တော့ဘူး….ပြွတ်….ပြွတ်….” တပြွတ်ပြွတ် လီးစုပ်နေတဲ့အသံနဲ့အတူ လှယဉ်မင်းရဲ့စကားသံကြောင့် ကျမသားကို လှယဉ်မင်း လီးစုပ်ပေးနေပြီဆို တာ သိလိုက်ရပါတယ်။ လှယဉ်မင်းရဲ့ လီးစုပ်ပေးနေသံတွေကြောင့် ကျမစိတ်တွေဟာ စိုးသီဟရဲ့ လီးတန်ကြီးဆီကို ရောက် ရှိသွားပြီး သူ့လီးကြီးကို စုပ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းတွေ ပြန်တွေးရင်း ကျမ စောက်ဖုတ်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်ကာ ထကြွနေတဲ့ ကျမရဲ့ ရမက်စိတ်တွေကို ပြေလိုပြေငြား ကြိုးစားနေရပါတော့တယ်ရှင်…. ပြီးပါပြီ
တစ်ယောက်တည်း ဒီလမ်းလေးကို လျောက်ရင်လည်းရောက်ပါတယ်